Nyowani yeIndia Ultra-Yakachipa-Inodhura Ndege Inogona Kuva Boon YeBoing
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Nyowani yeIndia Ultra-Yakachipa-Inodhura Ndege Inogona Kuva Boon YeBoing
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • India Kupwanya Nhau • Investments • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau
Kubata kutsva kunogona kuve chimwe chezvibvumirano zvikuru zvegore kunze kweUnited States kuti vatenge ndege dzeBoeing 737 dzakatengwa kana kubhadharwa.
Boeing inoona mukana wekuvandudza nzvimbo yayo muIndia.
Indian billionaire anozivisa nyowani-yakaderera-mutengo-mutakuri.
Mutsva mutsva wave kutofambira mberi,
US ndege inogadzira Boeing aigona kuwana mukana wekuwanazve nzvimbo yakarasika muIndia nemabhiridha Rakesh Jhunjhunwala achizivisa hurongwa hwekuvhura nendege nyowani yeIndia inodhura.
Kumira kwemusika weBoeing weIndia kwakakuvadzwa nekudonha kweimwe yevatengi vayo, Jet Airways, makore maviri apfuura.
Jhunjhunwala, anozivikanwa sa "Warren Buffett weIndia" nekuda kwekubudirira kwake muzvitoro, anoronga kubatana pamwe nevaimbove CEO veIndiGo, mutakuri mukuru wenyika, uye Jet Airways kuti vawane kudiwa kwekufamba nendege mudzimba.
Nepo Akhun Air yakataurwa naJhunjhunwala ichiuya panguva iyo indasitiri yendege yeIndia iri kunetseka nekukanganiswa nedenda reCOVID, iro rakaona ndege dzichirasikirwa nemabhiriyoni emadhora, tarisiro yenguva refu yechikamu ichi inoita musika unopisa wevanogadzira ndege Boeing neAirbus.
Imwe indasitiri sosi yakati iyo nyowani nyowani yaitove kuenda kune chingangove chimwe chezvibvumirano zvikuru zvegore kunze kweUnited States kuti vatenge kana kutengwa 737s.
Kune Boeing, uyu mukana wakanaka wekupinda nekukwidza mutambo wavo, tichifunga kuti havana mumwe mushandi mukuru wendege yavo 737 muIndia kunze kweSpiceJet.
Boeing haana kutaura nezvehurongwa hwaAkasa asi akati inogara ichitsvaga mikana uye hurukuro kune variko uye vangangove vatengi nezve kuti ingatsigire zvakadii ngarava uye zvido zvekushanda.
Jhunjhunwala, uyo ari kufunga nezvekudyara madhora makumi matatu nemashanu emadhora uye angave 35 muzana yemutakuri, anotarisira kuwana chitambi chekupokana kubva kubazi rezvemuchadenga reIndia mumazuva gumi anotevera, akadaro. Timu yendege inodhura-yakachipa iri kutarisa kuvaka ngarava dze40 15-vafambi ndege mukati memakore mana, akadaro.
Vamwe vavaki vaAkasa ndiAditya Ghosh, uyo akapedza makore gumi neIndoGo uye akapihwa mbiri yekubudirira kwayo kwekutanga, uye Vinay Dube, aimbova CEO weJet akashandawo neDelta.
Matenga eIndia anotongwa nevatakuri vemutengo wakaderera (LCCs) anosanganisira IndiGo, SpiceJet, GoFirst neAirAsia India, mazhinji acho achishandisa ndege dzeAirbus dzakatetepa-dzemuviri ndege.
Boeing inotonga musika wepakati-mutumbi weIndia ndege makumi mashanu neshanu asi hondo dzemitengo uye mitengo yakakwira zvakakonzera kukuvara pakati pevashandi vekutakura, kusanganisira Kingfisher Airlines mu51 neJet Airways mu2012, zvichiita kuti maLCC neAirbus zvitonyanya kutungamira.
Mugove waBoeing wemapurisa eIndia mazana mashanu nematanhatu akapfava-muviri akadonha kusvika pa570 muzana mushure mekufa kwaJet kubva pa18 muzana mu35, data kubva kubvunzurudzo yeCAPA India inoratidza. Jet nguva pfupi yadarika akanunurwa kubva mukubhuroka uye anotarisirwa kubhururuka zvakare.
Vatakuri veIndia vane ndege dzinopfuura mazana mapfumbamwe pahurongwa, makumi mapfumbamwe neshanu ndeveBoeing 900 ndege uye 185 maAirbus, ayo anoverengera IndiGo semumwe wevatengi vayo vakawanda pasi rose.